Dambudziko parinouya, Zvapupu zvaJehovha zvinokurumidza kuronga kuti zvibatsire hama dzinenge dzawirwa nenjodzi. Izvozvo zvinoratidza kuti tinodanana zvechokwadi. (Johani 13:34, 35; 1 Johani 3:17, 18) Tinobatsira munzira dzipi?
Tinopa mipiro yemari. Nzara huru payakaitika muJudhiya, vaKristu vepakutanga vaiva muAndiyoki vakatumira mari kuvaKristu vaiva muJudhiya. (Mabasa 11:27-30) Saizvozvowo, patinoziva kuti hama dzedu kune imwe nzvimbo dziri panguva yakaoma, tinotumira zvinhu nekuungano yedu kuti zvipiwe vaya vanenge vachinyanya kuda rubatsiro.—2 VaKorinde 8:13-15.
Tinopa ruyamuro runobatsira. Vakuru vanenge vari panzvimbo yaitikira njodzi vanotsvaka munhu mumwe nemumwe wemuungano kuti vave nechokwadi chokuti Zvapupu zvose zvawanikwa uye hazvisi pangozi. Dare rokuyamura ringaronga kugoverwa kwezvokudya, mvura yokunwa yakachena, pekugara uye kurapwa kwevanhu. Zvapupu zvakawanda zvine unyanzvi hunodiwa zvinozvipira kuenda zvichishandisa mari yazvo, uye vanobatanidzwa mubasa rokuyamura kana kuti rokugadzirisa misha neDzimba dzeUmambo zvinenge zvakanganisika. Kubatana kwatakaita sesangano uye ruzivo rwatakawana mukushanda pamwe chete zvinoita kuti tikurumidze kuisa misoro pamwe munguva dzematambudziko. Kunyange zvazvo tichibatsira “vaya vane ukama nesu mukutenda,” tinobatsirawo vamwe pazvinoita, pasinei nokuti ndevechitendero chipi.—VaGaratiya 6:10.
Tinopa nyaradzo inobva muMagwaro uye tinotsigira vanenge vachishushikana. Vanenge vawirwa nenjodzi vanonyanya kuda nyaradzo. Panguva dzakadaro, tinowana simba kubva kuna Jehovha, “Mwari wokunyaradza kwose.” (2 VaKorinde 1:3, 4) Tinofara kutaura nezvevimbiso dzeBhaibheri kune vaya vari mudambudziko, tichivavimbisa kuti pasina nguva Umambo hwaMwari huchapedza njodzi dzose dzinokonzera marwadzo uye kutambura.—Zvakazarurwa 21:4.
Nei Zvapupu zvichikwanisa kukurumidza kuita chimwe chinhu munguva dzenjodzi?
Inyaradzo ipi inobva muMagwaro yatingapa vanenge vapukunyuka?